I-Oppo Reno 10X ixhasa ukusondeza kwidijithali ukuya kuthi ga kwi-60X, ngaphezulu kweP30 Pro | I-Androidsis
El Oppo Reno ityhilwe kwinyanga ephelileyo eZurich, eSwitzerland. Isixhobo siphethe izixhobo ezinyanzelayo kubandakanya ikhamera enamandla, i-chipset Snapdragon 710 kunye ne-6/8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina yangaphakathi.
Ngoku, enye into ehambele phambili yesixhobo esinye, ekungekho enye ngaphandle kwe I-Oppo Reno 10X, iya kukhutshwa nge-10 kaMeyi e-China. Ngokwengxelo yeWeibo yamva nje nguBrian Shen, uSekela Mongameli weNtengiso yaseKhaya yaseTshayina, Iya kuxhasa i-60x yedijithali yokusondeza kwedijithali!
Ukonyuka kwale fowuni kunokufikelela ekufakeni iifoto kukuqhubela phambili okubonakalayo kuhlobo oluqhelekileyo lweOppo Reno. I-Oppo Reno 10X zoom edition nkqu, idlula amandla omboniso wedijithali angama-50x Huawei P30 Pro, ethi lukhulu.
I-Oppo Reno 10X inemodyuli yekhamera kathathu Inesiseko esine-48-megapixel sensor eyintloko, i-12-megapixel telephoto lens, kunye ne-8-megapixel resolution wide-angle lens. Imodyuli ye-lens ye-periscope kunye ne-16-160mm egxile kubude buququzelela amandla akho okusondeza, kodwa ungalibali i-Optical Image Stabilization (OIS) eqhayisa ukunciphisa ukushukuma komgangatho wekhamera xa usondeza.
Kukwakhona ikhamera ye-16-megapixel pop-up yangaphambili yekhamera ekhoyo kwii-selfie ezintle. Ngaxeshanye, Inikwe amandla yi-chipset Qualcomm Snapdragon 855 kwaye inyusa iscreen se-AMOLED esikwi-6.65-intshi.
Olunye uhlobo lweOppo Reno lufunyenwe kutshanje kumlawuli waseTshayina u-TENAA ngekhamera yangaphambili ephuculweyo kunye nolunye utshintsho. Izixhobo ezinamagama ekhowudi 'PCDM10' kunye 'PCDT10' zixhotyiswe yi-Snapdragon 710, 6GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina kwangaphakathi. Bakwabandakanya imodyuli yekhamera ezimbini, njengohlobo oluqhelekileyo, ii-bezels ezincinci kunye nebhetri enkulu kuhlobo lwabo olutsha.
Ushicilelo lwe-Oppo Reno 10X lokumiliselwa ngoMeyi 10 ngoKwenziwa ngcono kweZakhono zoKwenza kuneHuawei P30 Pro. Abasebenzisi banoku-odola kwangaphambili isixhobo ngaphambi kokumiliselwa e-China. Emva kokumiliselwa kwayo apho, urhwebo lwayo kweminye imimandla lwaluza kuza kamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Oppo Reno 10X igqwesa iHuawei P30 Pro kwi-zoom: ixhasa ukuya kuthi ga kwi-60X yedijithali yokusondeza